Ahoana no hampitombo ny isan'ny rohy ivelany?
Backlinks sisa no tena mampiavaka ny loharanom-baovao, ny maha-zava-dehibe ary ny fahefana. Mampiseho an'i Google izy ireo raha mila avoaka amin'ity tranonkala ity ao amin'ny TOP na tsia. Ireo rohy ekena avo lenta mivantana dia misy fiantraikany eo amin'ny toerana misy anao amin'ny valin'ny fikarohana. Na dia izany aza, tsy mora ny mividy siramamy mifandraika amin'ny tranokalan'ny avo PR raha toa ianao ka vaovao amin'ny tsena nomerika. Ho an'ny loharano vohikala madinika na vao haingana, ny tranokalan'ny fanorenana dia mety hipoitra be, raha toa kosa ka ny lalana rehetra "mora sy haingana" dia manohitra ny fitarihana Google ary mety miteraka ny fialan-tsasatra. Ankoatra izany, raha manamboatra rohy amin'ny fomba iray mampiahiahy ny fitaovam-pitadiavana ianao, mety ho mety hahazo sazy amin'ny Google ianao.
Androany, hiresaka momba ny andraikitry ny backlinks isika amin'ny fampiroboroboana ny aterineto ary miresaka teknika sasantsasany ahafahanao mahazo siramamy mifandraika bebe kokoa.
Fa maninona no mila backlinks ianao?
Amin'ny ankapobeny, ny fichier dia loharanom-baovao hafa mifandraika amin'ny blôginao. Raha manana tombam-bidy ho an'ny mpampiasa ity tranonkala ity ary heverina ho manan-danja amin'ny alalan'ny karoka fitadiavana, ny rohy azo avy aminy dia hitondra any amin'ny tranokalan'ny kalitaon'ny tranonkala. Na izany aza, raha mametraka rohy ao amin'ny spammy ianao, loharanom-baovao vao haingana, dia tsy dia misy dikany loatra ny fahafahanao manamboatra sira mifandraika. Ny rohy malemy kokoa dia manondro ny tranokalanao, ny fahefana bebe kokoa azonao amin'ny sehatry ny fikarohana.
Tokony hahafantatra ireo tanjona samihafa amin'ny rohy ivelany ianao raha mahazo valiny hafa avy amin'ny karazana backlink. Ny rohy dia samy hafa amin'ny fiantsoana raha ianao no mifandray na mifandray amin'ny.
Noho izany dia andeha isika hanisa tombontsoa sasantsasany izay mitondra any amin'ny tranokalantsika:
Backlinks dia mandefa ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanareo
Mamorona fanentanana fananganana rindrambaiko tsara, ahazoanao fifamoivoizana avy amin'ny loharanom-baovao hafa raha toa ka misy mpamaky mamaky lahatsora-peo miaraka amin'ny rohy misy anao amin'ny tsipika hahazoana vaovao misimisy kokoa.
Backlinks mitondra ny fahefana eo amin'ny tranokalanao
Ny famerenana an-tsoratra dia natao ho an'ny mpitoraka blaogy hafa ary miteny milina fikarohana momba ny laza sy fahefana ankapobeny ny sehatra misy anao. Izany dia manompana tanteraka ny fanatsaranao ny fanentanana ny marika.
Voamarikao amin'ny tompon'ny tranonkala hafa ianao
Rehefa mametraka rohy eo amin'ny tranokalanao ianao izay manondro sehatra iray hafa, tompon-tranon'io tranonkala io dia hahatsikaritra ity fampahalalana ity amin'ny alàlan'ny rindrambaiko analyse (f. f. Web Analyzer na ny Google Analytics). Fotoana tena tsara ho anao ny hahazo loharanom-baovao hafa mifandraika amin'ny sehatry ny tranonkala hahatsikaritra ny sehatra misy anao ary hanorina fifandraisana tsara eo aminao.
Ahoana no hampitomboana ny isan'ny backlinks?
Mamorona zavatra tsy manam-paharoa
Mba hahazoana rindran-damina ara-boaary, mila mamokatra votoaty tsy manam-paharoa ianao. Na izany aza, ireo tompon'ny tranonkala hendry dia mamorona votoaty tsara, ary mety ho very amin'ny lahatsoratra hafa ianao. Azonao atao ny manandrana manatona ny teny fanalahidinao avo lenta miaraka amin'ny votoaty izay tsy mitovy amin'ny sisa. Raha azonao atao ny manome ny zava-baovao tianao ho an'ny mpihaino anao, dia ny mpampiasa indrindra no hizara izany amin'ny hafa ary koa ireo bilaogera hafa dia ho liana amin'ny brand.
Mifandraisa amin'ireo mpitoraka blaogy
Ny fifandraisana amin'ireo mpitoraka blaogy hafa dia fomba tsara indrindra ahafahana miverimberina bebe kokoa satria tafiditra ao amin'ny radar ireo bilaogy ireo. Rehefa mifandray amin'ny olon-kafa ianao, dia mety ho azonao ampiharina, rohy, ary fampiroboroboana organika Source .